Ny faharetana ao amin'i Kristy Jesosy
2 Jaona 9 : “Izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra ao amin'ny fampianaran'i Kristy, dia tsy manana an'Andriamanitra. Izay mitoetra ao amin'ny fampianarana, dia izy no manana ny Ray sy ny Zanaka.”
Inona ary ireo fampianaran’i Kristy? Ampahany ihany ireto.
Tiava ny fahavalonareo
Lioka 6:27 “ Kanefa hoy Izaho aminareo izay mihainy: tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin'izay mankahala anareo”
Mivavaha ho an’izay manenjika anareo
Matio 5:44 “ Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo.”
Izay manetry tena no asandratra
Lioka 14:11 “ Fa izay rehetra manandra-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra.”
“Ahy ny famaliana hoy Jehovah”
Romana 12:19 “ Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo làlana ny fahatezerana; fa voasoratra hoe: ‘Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah’ ”
Aoka hitoetra tsara ao amin’ireo fampianaran’I Kristy isika.
Ny mpaminany sandoka dia miteny ny anaran’I Jesosy Kristy fa tsy manaiky an’I Jesosy eo amin’ny fiainany.
FAHARETANA AO AMIN’I JESOSY KRISTY
Tsy maintsy hoavy ny vanin’andro sarotra sy ny zava-manahirana eo amin’ny fiainantsika. Hihamangotraka sy hihamafy izany ny fahasahiranana.
Matio 24:22 “ Ary raha tsy efa nohafohezina izany andro izany, dia tsy nisy nofo hovonjena; fa noho ny olom-boafidy dia hohafohezina izany andro izany.”
Mikororoka hatramin’ny farany ny devoly amin’izao fotoana izao. Noho izany dia mila tena mijoro tsara isika.
Ny faharetana :
- Manara-dia ny Tompo
- Miandry valim-bavaka
- Miharitra ny fotoan-tsarotra
Ireo zavatra mety mitranga dia :
- Mivavaka isika fa miozongozona rehefa avy eo. Manontany tena hoe misy ve izao Andriamanitra izao? Aiza ihany ny valim-bavaka?
- Indraindray isika maheno olona mitaraina foana rehefa mivavaka. Angamba ity teny ao amin’ny Isaia 62 ity no tazoniny, izay tsy misy maharatsy azy.
Isaia 62:6 “… ianareo izay mpampahatsiaro an'i Jehovah, aza mitsahatra”
Fa aza adino fa hoy ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Hebreo:
Hebreo 11:6 “ Fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy.”
- Ny olona sasany indray dia rehefa misy olana ihany vao tena mitolona am-bavaka fa rehefa afaka izany dia mijanona indray.
Lioka 21:19 “Amin'ny faharetanareo no hahatananareo ny ainareo.”
Miharitra ”persévérance ”, maharitra, ao no hisian’ny hery. Tsy mba fomba fiasan’Andriamanitra ny maimaika
Ny zavatra tokony hataontsika:
Tokony hahafantatra tsara ity Andriamanitra hivavahantsika ity isika .
Andriamanitry ny faharetana
Romana 15:5 “Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an'i Kristy Jesosy.”
Andriamanitry ny faharetana no hivavahantsika. Andriamanitra tsy mba maimaika. Tsy nametraka fotoana mihintsy Izy ny amin’ny valim-bavaka.
Hosea 5:9 “Ho lao Efraima, raha mby amin'ny andro fanamelohana; Izay tsy maintsy ho tò no nambarako tao amin'ny firenen'Isiraely “
Tsy mba misy ny olana ara-potoana eo amin’Andriamanitra izay hivavahantsika. Diniho tsara fa:
- 2 Petera 3:8 “Nefa, ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy hohadinoinareo: ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro.”
Esory ao anatinao ny fotoana tokony hamalian’Andriamanitra anao. Andriamanitra tsy nametraka fotoana taminao. Fa rehefa mivavaka ianao dia voalaza fa na inona na inona angatahanareo dia ho azonareo izany.
Matio 21:22 “ Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo.”
Dikan’izany dia tsy maintsy hanome Izy fa saingy tsy nilaza kosa Izy ny fotoana. Rehefa mivavaka ianao dia mila mitoetra ao anatin’ny faharetana satria Andriamanitra dia faharetana.
- Galatiana 5: 22 “Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana,”
Toetran’ny Fanahy Masin’Andriamanitra sy ny toetran’I Jesosy ny faharetana.
Ny maimaika dia tsy mba toetran’Andriamanitra ary tsy fomba fiasany ihany koa.
Ohatra raisina ao amin’ny Baiboly
Genesisy 12:1-4 “ARY hoy Jehovah tamin'i Abrama: Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao hankany amin'ny tany izay hasehoko anao; dia haha­tonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa hianao; ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrama araka izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary Lota koa mba niaraka taminy. Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy.”
75 taona i Abrama no tonga tamin’ny ny Teny Fikasan’Andriamanitra fa avy amin’ny taranany no hitahiana ny firenena rehetra. Kanefa any amin’ny faha-100 taonany vao teraka an’I Isaka izy.
Genesisy 21:5 “Ary efa zato taona Abrahama, raha niteraka an'i Isaka zanany izy.”
25 taona taty aoriana vao tonga taminy ny Teny Fikasana. Ary i Saray vadiny izay maimaika dia nampiseho zava-doza satria tsy naharitra ny fotoan’Andriamanitra. Toetran’ny devoly ny maimaika.
Ny vokatry ny tsy faharetana dia io ady ao “Moyen-Orient” io, Ismaelita miady foana amin’ny rahalahiny.
Notadiavin’ny Devoly hovonoina alohan’ny fotoana Jesosy. Raha tsy tonga ny fotoan’Andriamanitra dia tsy maty Izy.
Marka 11:24 “Koa lazaiko aminareo: Na inona na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia minoa fa efa nandray hianareo, dia ho azonareo izany.”
Rehefa mivavaka isika, manao ahoana ny toe-panahy ao anatitsika ao?
2 “Ary izao no tantaran'i Jakoba: Rehefa fito ambin'ny folo taona Josefa, (…)
5 Ary nanonofy Josefa , ka nambarany tamin'ireo rahalahiny; dia vao mainka nankahalany azy izany. (…)
8 Ary hoy ny rahalahiny taminy: Moa hanjaka aminay tokoa va hianao? na hanapaka anay tokoa va hianao? Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy.
9 Ary nanonofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny; dia hoy izy: Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo niankohoka teo anatrehako.
10 Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany; dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe: Manao ahoana izany nofy efa nonofisinao izany? Moa ho avy tokoa va aho sy ny reninao ary ny rahalahinao ka hiankohoka amin'ny tany eo anatrehanao?
11 Dia nialona azy ny rahalahiny; fa ny rainy kosa nitadidy izany zavatra izany.”
Tamin’ny faha-17 taonany Josefa dia efa nomanin’Andriamanitra fa hiankohoka eo anatrehany ireo rahalahiny.
Genesisy 41:46 “Ary efa telo-polo taona Josefa, raha niseho teo anatrehan'i Farao, mpanjakan'i Egypta. Dia niala teo anatrehan'i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra.”
Genesisy 42:9 “Ary Josefa nahatsiaro ireo nofy nanofisany azy…”
Jereo fa any amin’ny faha-30 taonany vao tanteraka izany Teny fikasana izany.
Andriamanitra tsy niteny tamin’i Josefa hoe afaka 13 taona, na tamin’i Abrahama hoe afaka 25 taona no hanatanterahany izay nolazainy. Fa rehefa niteny fotsiny Izy dia hotanterahany izany.
Ezekiela 12:25 “ Fa Izaho no Jehovah; hiteny Aho, ary ny teny lazaiko dia ho tò tokoa (…)”
Izany toe-panahy “maharitra ” izany no tokony hananantsika manoloana izay valim-bavaka rehetra izay andrasantsika.
Ny devoly no manositosika ary mila mitandrina tsara isika manoloana izany.
Ny tokony hojerentsika foana dia ny fomba fiasan’Andrimanitra, ahoana no fomba fiasan’Andriamanitra?
Raha naheno i Jesosy fa narary i Lazarosy sakaizany dia tsy nandeha nankany aminy aingana Izy fa mbola niandry 2 andro. Ary rehefa tonga tany an-toerana Jesosy dia efa nalevina 4 andro i Lazarosy.
Jaona 11:6 “ Ka nony ren'i Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany Izy.”
Jaona 11:39-40 “Hoy Jesosy: Esory ny vato. Hoy Marta, anabavin'ny maty, taminy: Tompoko, maimbo izy izao, fa efa hefarana izay. Hoy Jesosy taminy: Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra?”
Tsy mba maimaika rehefa manaraka ny Tompo. Ary tsy izany no fomba fisainana rehefa miaraka aminy, fa miandry amin’ny faharetana.
Joba rehefa nivavaka ho an’ny sakaizany dia nampodian’Andriamanitra ny fiadanany. 10 no isan’ny zanany, fotoana maro taty aoriana izany vao niverina ny fiadanany.
Joba 42:10 “Ary Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba, raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy, ka dia nanome azy indroa toraka izay nananany fahiny Izy.”
Avelao Andriamanitra hiasa amin’ny maha-Andriamanitra Azy. Fa isika rehefa mivavaka dia manànà faharetana.
Timoty 6:9 “ Ary izay ta-hanan-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana.”
Isaia 60:22 “Ny kely ho tonga arivo, ary ny malemy ho tonga firenena mahery; Izaho Jehovah no hanafaingana izany amin'ny fotoany.”
Aza maimaika fa raha azonao atao dia akipiho ny maso ary tapeno ny sofina dia manomboha mijery sy miandry an’I Jesosy. Nijery onja no nahavoa an’I Petera.
Mitoetra amin’ny fampianaran’i Kristy Jesosy
Andriamanitra tsy mihaino ny mpanompony izay tsy mipetraka ny fampianaran’I Kristy.
Sambatra izay madio am-po
Diovy aloha ny fo. Ianao miandry valim-bavaka kanefa ianao tsy madio am-po.
Mitoetra eo amin’ny fampianaran’I Kristy. Toe-panahy takian’Andriamanitra izany.
Tsy tara ny valim-bavaka fa aza matahotra. Amintsika mety ho ela loatra fa amin’Andriamanitra tsy tara mihintsy.
Misy antony Andriamanitra raha toa mitaredretra ary tena toetran’Andriamanira mihintsy izany.
Habakoka 2:3 “ Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoan'andro, Ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso; Eny, na dia mitaredretra aza izy, andraso ihany, Fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona.”
Mivavaka mba hampitoetra ny Fanahy Masin’Andriamanitra ao anaty
Efa hitan’Andriamanitra io olana eo aminao io raha tena zanak’Andriamanitra marina ianao, mba tsy hitaraina, na hitalaho na hiferin’aina isan’andro ianao. Ny fitarainana isan’andro dia tsy fomba fivavahan’izay olona tena mitoetra tsara amin’Andriamanitra.
Ny Fanahy Masina, dia ilay Andriamanitra, ilay Jesosy, raha tsy mahazo toerana tsara ao am-potsika dia tsy maintsy sahirana isika, ary miovaova ny heritreritsika.
Ny Fanahy Masina dia manome ilay toe-panahy “maharitra”.
Ary ny faharetana dia endriky ny finoana . Ny olona tena mino an’Andriamanitra dia manana faharetana eo am-piandrasana ny valim-bavaka ary izay no ahafantarana azy na inona na inona mitranga eo amin’ny manodidina.
Ny toetran’Andriamanitra :
- tsy mba mandainga io hivavahantsika io .
Nomery 23:19« Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, Na zanak'olombelona ka hanenina; Moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? Na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny? »
- Tsy mba mivadibadi-dela, fa rehefa Eny dia Eny
Rehefa miteny Izy hoe : « Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, Ahy ny famaliana » na « Ianareo hangiana fa Izaho no hiady ho anareo » dia ampy izay. Rehefa mangotraka ny ady dia akombony ny vava, aza mamaly mihintsy, ka mangataha ny Fanahy Masina hanana ny Faharetana.
Ny olona maharitra no atao hoe olona manam-pinoana.
Andrasako eto Ianao Andriamanitra ô! Na rahoviana na rahoviana.
Fa ao anatin’izany kosa dia mivavaka mba hitoetra tsara amin’ny fahamasinana, arovana mba tsy ho voapetipetina ny fanahy, ny eritreritra, ny fomba atao rehetra dia AROVANA.
Filipiana 4:6 “ Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatrarehetra. ” .
Vavaka “revision spirituelle”. Tsy anjaratsika ny miady sy mikoropaka etsy sy eroa. Rehefa tena zanak’Andriamanitra marina isika dia mitombona foana ilay teny hoe :
Isaia 45:11 “ Izao no lazan'i Jehovah ny Iray Masin'ny Isiraely, dia ny namorona azy: Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany.”
Andriamanitra no miteny aminao eto hoe aza matahotra, Izy no hiaro sy homba ny zanany fa manana faharetana.
Ataovy toy ny efa nahazo ianao.
Eto am-piandrasana ny valim-bavaka isika, izao no vavaka atao :
- Ambarao fa Andriamanitra tsy mba mandainga
- Ambarao fa tsy miova Andriamanitra , tahaka ny fomba fiasany teo aloha no mbola ataony amin’izao fotoana izao sy ny ho amin’ny hoavin‘ny fireneny
Jereo ny tantaran’ny zanak’Israely. Ary eto Andriamanitra tsy mila olona betsaka, fa na dia roa fotsiny aza mifanaiky dia hihaino any an-danitra Izy.
Matio 18:20 “ Fa na aiza na aiza no iangonan'ny roa na teloamin'ny anarako, dia ao afovoany Aho.”
Andriamanitra efa ho avy hamangy ny firenena fa manàna faharetana. Ho ren-tany horen-danitra fa Jesosy no miasa eo amin’ny fiainanao manokana.
Tompo ô! Ataovy fantatry ny fianakaviana fa velona Ianao ary tsy menatra izay rehetra mino ny anarako hoy Ianao.
Romana 10:11 “Fa hoy ny Soratra Masina: "tsy ho menatra izay rehetra mino Azy"
- Derao Andriamanitra fa Mahery, fa Lehibe indrindra Izy . Ary izany no dikan’ilay Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Filipiana 4:6
Filipiana 4:6 “ Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra.”
Tsy misy resaka fangatahana ao.fa Andriamanitra hiaro nby zanany.
Fanasitranana ho an’ny nofonao sy ny fanahinao
Miasa amin’izay Andriamanitra
Fiainana izao ambara amintsika izao .
Fa rehefa mitoetra tsara ianao dia izay mikitika anao dia mikitika ny anakandriamason’Andriamanitra.
Zakaria 2:12 “ Fa izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro: Hampiseho* voninahitra no nanirahany ahy tany amin'ny firenena izay namabo anareo; fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasony. [Heb. aorian'ny]”
Isaia 54:17 “ Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy hambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany no lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehovah.”
Izany no Andriamanitra, izay hivavahantsika. Tsy miady amin’ny nofo aman-drà isika fa ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra.
Tsy olana ara-toe-karena no misy eo amin’ny firenentsika fa olana eo amin’ny fon’ny olona. Ny Fanahin’Andriamanitra no mila miditra ao anatitsika.
Tsy misy na inona azo atao raha tsy amin’ny faharentana sy mitoetra tsara amin’ny finoana sy ny fahamasinana.
Arovy ny tenanao, arovy ny teny aloaky ny vavanao, arovy ny toe-tsainao.
Hebreo 12:14 “ Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo.”